Azụmaahịa nke ara | Martech Zone
M na-ele ozi akụkọ na-egosi ụbọchị ọzọ na GoDaddy na-akpọsa ụfọdụ mgbasa ozi Superbowl na-agbagha. Ndị otu ahịa GoDaddy na-agbanye oke njedebe n'afọ a, na-elebara anya ọzọ site n'itinye ụyọkọ azụmahịa nke a jụrụ maka ilele maka superbowl a.
GoDaddy na-ekwupụta esemokwu ahụ n'ụzọ doro anya dị ka ọchịchọ ha maka Super Bowl XL. Ga-ahụ nnukwu usoro iheomume nke azụmahịa na ekweghị ikiri na Superbowl site na saịtị ha. Dị ka ọ dị n'afọ gara aga, mkpọsa boob a na-adọrọ ọtụtụ GoDaddy. Amaara m na m na-etinye m na ha, bụ, mgbasa ozi ahịa.
O doro anya na nke a bụ ihe ịga nke ọma ahịa GoDaddy. Otú ọ dị, m na-eche ihe kpatara ya. Agaghị m agha ụgha, enwere m mmasị ilele mkpọsa ndị a dị ka onye na-esote. Mana ịzụta ngalaba site na GoDaddy anaghị enyekwu ohere maka ndị ahụ. Ọ dịghị ụbọchị, ọ dịghị akwụkwọ mmado, ọ dịghị autographs, ọ dịghị ihe ọ bụla… ọbụnadị ntabi anya. Mgbe ịzụrụ ngalaba maka ara, ị ga-ahapụ azụmaahịa gị. Kedu ihe ara na-agwa anyị gbasara azụmaahịa a. Lelee azụmahịa niile na GoDaddy.com. Onwere onye n'ime ha kwuru ihe gbasara azụmaahịa ahụ n'ezie?
Gị na ngalaba na-edeba aha bụ ihe dị mkpa mkpebi. Ha na-achịkwa ngalaba gị. Nke ahụ dị ka ụlọ akụ na-ejikwa ego gị. Ha kwesiri inwe ntụkwasị obi, nwee nnukwu atụmatụ, ma nwee ngwaọrụ nchịkwa dị egwu maka ijikwa ngalaba gị. Mụ na GoDaddy arụ ọrụ, ụfọdụ ndị ahịa m nwere ngalaba ha kwadoro na GoDaddy. Mma ara, lousy interface. Nke ahụ bụ ihe m maara banyere GoDaddy.
N'ụzọ na-emegide, Ikpeazụ Wednesday m natara onye na ekwentị oku site n'aka Ben Goldsmith, Mgbakwunye Manager na Dotster.com
. Ben abụọ kelere m maka ịkwado Dotster site na weebụsaịtị m na a adịbeghị anya post ọ kpọbatara m na njikọta njikọ m na weebụsaịtị m nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ ọfụma n'ihi na m na-ezo aka na saịtị m wepụrụ na akaụntụ mgbakwunye m. Chei… ugbu a mara mma. Ben lekọtara nke ọma na ọ kpọọrọ m ekwentị ahụ.
Enwetụbeghị m obi ụtọ ịgwa onye ọ bụla na Dotster n'onwe m n'ihu… nke ahụ dị mkpa n'ihi na ọ pụtara na onyinye ha na-arụ ọrụ dị ukwuu. Enwere m oge ịgwa Ben na nke ahụ na ekwentị. Mgbe nro nke m nwere na register.com ọtụtụ ọnwa gara aga, agbalịrị m Dotster na mụ na ha nọ kemgbe.
Boobs nwere ike ịdị mma ile anya, mana Dotster.com
bụ nnukwu ebe ịdebanye aha gị na ngalaba. oge.
Dotster nwekwara ọtụtụ mmemme ndị ọzọ na onyinye ọrụ, gụnyere VDS nnabata. Lelee ha mgbe ị na-enwe ohere, M na-ekwe nkwa na ị gaghị na-emeso ara… ma nke ahụ bụ ihe dị mkpa maka azụmahịa gị.
PS: Enwere m njikọta njikọ maka Dotster.com na post a. Achọrọ m ịhụ ma ọ bụrụ na ọrụ ndị ahụ na mgbasa ozi mgbakwunye.
Tags: mgbasa oziaraonye na-edeba aha ngalabandebanye ahadotstergodaddy
Jenụwarị 18, 2007 na 1:51 PM
Dị ka ọ bụla mgbasa ozi; ị nwere ike ịme mkpọsa kachasị mma, mana ọ bụrụ na ngwaahịa a agbarụ, ọ ga-ada. (Hey, ka anyị hụ ka Vista ga-esi eme ya.)
Mana nke ahụ kwuru, ọ bụrụ na ị ga-etinye ọkọlọtọ 2 - boobs si GoDaddy na ntụpọ ụwa poster. Gwa ha eziokwu: kedụ nke ị ga-ebu ụzọ pịa? 🙂
Jenụwarị 18, 2007 na 5:17 PM
Mmekọahụ na-ere. A eluigwe na ala… eziokwu maka tech, egwuregwu, ntụrụndụ, ihe ọ bụla!
Jenụwarị 18, 2007 na 8:52 PM
Site na aha, Echere m na nke a ga-abụ ọkwa banyere Congress 🙂
Ekwenyere m na ara na-ere, mana m gaghị achọ ọgbaghara na ngalaba m. Anọ m na DirectNIC ruo ọtụtụ afọ, ha na-adịkwa mma mgbe niile. Ọbụna ha rụrụ ọrụ site na Katrina (ha dabere na NO), wee rụọ ọrụ ha iji mee ka ihe niile na-agba ọsọ.
Ara, ma ọ bụ enweghị ara, M na-arapara n'ahụ ha.
Jenụwarị 18, 2007 na 9:59 PM
Martin: Um… dotster n'ezie. 😉
Tony Chung: Ọ dị mwute ma ọ bụ eziokwu… nsogbu dị ebe a bụ na enweghị mmekọahụ, naanị mkpali.
Tony D. Clark: Ma ọ dịkarịa ala, ara ndị a nwere nzube ma dị mma karịa!
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ezigbo ihe kpatara ịghara imeso GoDaddy, ị ga-ahụ ya Ebe a.
Otu maka m. Echere m na nke a bụ ọkwa maka ụfọdụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ugbu a m matara na m kwenyesiri ike na m hụrụ mgbasa ozi boob sitere na GoDaddy na enwere m ngalaba m ebe ahụ.